Dhacdooyinkii ugu waa weynaa todobaadkii tagey ee Soomaaliya – Xorriya Online
Dhacdooyinkii ugu waa weynaa todobaadkii tagey ee Soomaaliya
Todobaadkii lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa soo maray maalmo xanuun badan oo taariikhda baal-muqdi ah ka galay kadib markii shaqsiyaad muhiim ah uu dilay COVID-19, kala soco macluumaad dheeraad ah warbixinta todobaadlaha ee Xorriya Online.
22 February 2021: Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo Garoowe ku qabatay shir jaraa’id ayaa jeediyay hadalo xanaf leh oo dad badan oo arimaha siyaasadda rog-roga ku noqday dhabana-heys, isagoo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu dalka xoog ku qabsado, oo uusan doorasho doonaynin inuu qabto. Hadalkan ayaa waxaa si aad ah uga horyimid isla bulshadda Puntland ku dhaqan.
23 February 2021: Ugaas Xassan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble, oo ahaa Ugaaska Beesha Xawaadle ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho, waxaana dhimashadiisa loo sababeeyay warar is-qilaafsan halka wararkii hordhaca ee dhimashiisa lagu sheegay cudurka COVID-19, oo dhawaan kusoo laba-kacleeyay Soomaaliya. Halka war qoraalka oo kasoo baxay isbitaalka Madiino oo la geeyay AUN Ugaas Xasan ay sheegeyn in Ugaaska wadnaha uu istaagay.
Dhacdo 2-aad: Qarax ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qof ciidanka ay eryanayeen oo jaakadiisa qarax ku xirnaa uu ku tuurey saldhigga booliska degmada Xamar-weyne, waxaana uu dhaawac gaarsiiyay taliyaha saldhigga.
24 Febuary 2021: Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqey Madaxweyne Farmaajo in haddii uu rabo in dalka doorasho ka dhacdo loo baahan yahay inuu xilka ka qaado Fahad Yaasiin, oo uu ku eedeeyay inuu mas’uul ka yahay dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira.
25 Febuary 2021: Musharixiinta mucaaradka ayaa Decale hotel oo garoonka diyaaradaha ku yaalla kula kulmay Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, iyagoo gabagabada kulanka kasoo saarey qoraal ay ku shaaciyeen in dib loo dhigay banaanbaxii Jimcaha, sidoo kalena heshiis laga gaarey dhibaatadii dhacday 19-kii Febuary.
26 Febuary 2021: Gollaha amaanka ayaa mudo-kordhin kale u sameeyay AMISOM oo dalka ku sugan tan iyo 2007, iyadoo aan wax natiijo ah laga gaarin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, oo laga saari waayay goobaha ay joogaan.
27 Febuary 2021: Gollaha amaanka ayaa xayiraado kusoo rogay saddex hogaamiye oo kamid ah Al-Shabaab, kuwaasoo kala ah Abuukar Cali Aadan, ku-xigeen hoggaamiyaha Al-Shabaab, Macalin Ayman, taliyaha garabka Jaysh Ayman ee ka dagaalama Kenya iyo Mahad Karate, hogaamiye kuxigeen hore ahna shaqsi awood badan ku dhex leh Kooxda.
Dhacdo 2-aad: Wasaaradda Caafimaadka DF ayaa shaacisay in 304 qof laga helay COVID-19, kuwaasoo 147 kamid ah Muqdisho ku sugan yihiin, waxaana u dhimatay caabuqa labadii maalin ee lasoo dhaafay dad gaaraya 8 ruux. Isbitaalka Martiini ee Muqdisho ayaan lahayn Ogygen, taasoo keentay in bukaanada neef la’aan u geeriyoodaan.
28 Febuary 2021: Ra’iisul wasaaraha xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa habka fogaan aragga shir kula yeeshay wakiillada beesha caalamka, kaas oo looga hadlay sii wadista wada xaajoodyada DFS iyo Dowlad-goboleedyada ee la xiriira hirgalinta heshiiskii 17-kii September 2020 iyo qodobbadii guddigii farsamo ee Baydhabo. Shirkan ayaa sidoo kale lagu bogaadiyay isfahamkii ka soo baxay shirkii ra’iisul wasaare Rooble iyo midowga musharixiinta mucaaradka ee 25-kii Febraayo.
Dhacdo 2-aad: Sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, tirada kiisaska cudurka Coronavirus ee 24-kii saac ee u dambeeyay laga heley ayaa maraysa 266 kiis, iyadoo 1,807 la baaray, gobolka Banaadir ayaa ah gobolka ugu badan ee kiisaska cudurka laga heley taas oo ah 141 kiis.
Puntland ayaa laga heley 88 kiis, halka 25 kiis laga diiwaan geliyay Soomaaliland, iyadoo 8 qof xanuunka u dhinteen. Tirada guud ee kiisaska cudurka ayaa maraysa 7,257 kiis oo ay ku jiraan 3,808 oo cudurka ka bogsooday iyo 239 oo u dhimatay cudurka.